अक्सर गरेर शौचालय जाने र ठूलो छ, कि सामान्य हो?
"म अक्सर धेरै, म ख्याल शौचालय जानुहोस्।": चिकित्सकको कार्यालय भ्रमण गर्दा एक वयस्क आवाज उजुरी गाह्रो हुन सक्छ धेरै संकोच जस्तै मुद्दाहरू छलफल।
त्यहाँ एक नियम प्रति दिन आंत्र आन्दोलनहरु को संख्या छ?
अचम्मको कुरा, एक वयस्क लागि प्रति दिन आंत्र आन्दोलनहरु को एक आदर्श छ।2पटक - यो 1 छ। त्यहाँ प्राय शौचालय गर्न जो जाने ती हुन्, तर प्रायजसो यो एक समयमा आंत्र खाली गर्न नसक्नुको देखि उत्पन्न हुन्छ।
रोगी गरेको उजुरी मा डाक्टर: "अक्सर म थप लागि जाने" - तपाईं एक "reverie को कुना" भ्रमण गर्दा ठीक हुन्छ के, सोध्न निश्चित हुन। इच्छा सम्भवत गलत, त्यसपछि हो भने, नसा विशेषज्ञ पठाउन।
यस बारम्बार शौचालय भ्रमणमा को कारण
तरिका उजुरी "अक्सर शौचालय र ठूलो जान सामान्य कुर्सी मा नै मुद्दा मा उजुरी भन्दा एक ठूलो हदसम्म डाक्टर छन् सुन्न कारण पखाला गर्न"। पखाला - एक विकृति, यो पनि छोराछोरीलाई चिनिएको छ। यो संक्रामक रोग, को intestines र पाचन प्रणालीमा संलग्न अङ्गहरूको रोगहरु समयमा हुन्छ। पखाला दबाइ र लोक उपचार संग उपचार।
को मल सामान्य छ भने, त्यसपछि भूल प्रयास र छलफल गरेनन् को समस्या - पनि नातेदार संग। तर केवल स्थिरता लागि निर्देशित गर्न सकिन्छ। defecate आग्रह फ्रिक्वेन्सी पहिले नै शरीर केही सुरु विकार को एक चिन्ह हो।
बारम्बार आंत्र आन्दोलनहरु संकेत हुन सक्छ:
कोलनले को रोगहरु;
को bile ducts को सुनिंनु;
अग्न्याशय को इनकार।
र वास्तवमा यो कुर्सी kolbasovidnoy आकार र लोचदार स्थिरता कि, पर्याप्त कुनै विकृति छ भन्ने छ। ठूलो महत्व यसको रंग छ।
रोगी complains भने: "म अक्सर शौचालय एक ठूलो, उज्यालो र कुर्सी मा जाने", - यो bile को उत्पादन भङ्ग छ, वा अवरुद्ध bile ducts भने। गाढा मल को एक ठूलो रकम एक पारंपरिक रकम मा अग्न्याशय को अवस्था र सामान्य मल ध्यान आवश्यक छ, तर, केही समय पछि छोडने स्फिन्क्टर को spasm संकेत। र यो आन्द्रा मात्र होइन रोग, तर पनि स्नायु प्रणाली विकार सक्छ।
शौचालय भ्रमणमा संख्या कम गर्न के गर्ने?
अर्डर कारण लत एक प्रकारको गर्न हुन्छ जो असुविधाको, हटाउन, यो कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ। पास गर्न, चिकित्सक, Gastroenterologist, सायद Proctologist गर्न सम्बोधन गर्न हुनेछ एक मल नमूना जीवाणुहरु overgrowth लागि।
कहिलेकाहीं तपाईं के गर्न आवश्यक आन्तरिक अङ्गहरूको अल्ट्रासाउंड र पनि colonoscopy। डाक्टर विशेष विरामीहरु पीडा ठान्छन् छैन। यदि रोगी भन्छन्: "म अक्सर जाने अझ मा शौचालय गर्न" - समस्या तल्लो आन्द्रा को पैदा हुनेवाला रोग को आशङ्का एक डाक्टर हुन सक्छ voiced। यो कब्जियत को एक कारण भएको मलाशय को एक ट्यूमर छ रूपमा हुन्छ। यो एक निदान यसअघि, थप अनुकूल रिकभरी लागि पूर्वानुमान हुनेछ।
निस्सन्देह, हामी भन्न सक्छौं: "म अक्सर शौचालय जाने र कुनै यो लागू हुँदैन।" तर आफैलाई "reverie को कुना" मा यस्तो निर्भरता रोक्दैन गर्छन्?
तपाईं चाहनाको सहन सक्छौं भने पनि, त्यसपछि अर्को समय खराब हुनेछ। यो प्रक्रिया प्रतिरोध कब्जियत गराउँछ, को पेट गठन मा zashlakovyvaetsya जीव fecal पत्थर, त्यसपछि यो नाजुक mucosal चोट लाग्नु जुन।
डाक्टर रोगी सुन्न सक्नुहुन्छ भने: "अक्सर म थप मा शौचालय जाने" - उहाँले यो वास्तविक समस्या छ भनेर बुझ्छ। एक चिकित्सा कार्यालय मा समान साझेदारी गर्न लजालु नगर्नुहोस्। यसलाई स्वास्थ्य आउँदा, झूटा लाज खारेज गर्न आवश्यक छ।
अत्यावश्यक क्षमता र निर्धारण लागि विधिहरू
एक inhaler कसरी चयन गर्ने?
को subarachnoid ठाउँ मा atrophic hydrocephalus को प्रभाव
भित्री कान। संरचना र कार्य।
विद्युत दुर्घटना लागि पहिलो सहायता
योनी मा एक जलन
Starodub पनीर। पूर्व को दिइरहनुभएको परम्परा को स्वाद
कसरी विभिन्न तरिकामा लिजाना बनाउने?
स्पाइनल घेरा: प्रकार, उद्देश्य, लागूपदार्थ, को प्रभाव
छिटो र स्वादिष्ट खाना पकाउन कसरी कुम्मैत सूप
एक एक वर्ष सम्म बच्चा मा Norma हेमोग्लोबिन - एक प्रमुख सूचक
घर केचप नुस्खा
डेनिस Stengelov: जीवनी, परिवार स्थिति। "KDV समूह"
"मानिसको भाग्य": मिखाइल Sholokhov गरेर काम मा एक निबंध
कसरी पेन्सिल एक मेपल आकर्षित गर्न? चरण पुस्तिका द्वारा चरण
लेमन Tart: एक नुस्खा। एक फ्रान्सेली कागति र स्याउ tart कसरी खाना पकाउनु
इतिहास मा 6, सबै भन्दा प्रसिद्ध र अविश्वसनीय संयोग